I-Flexible Solar Charger, i-Flexible Solar Panel Chargeer, umenzi we-Back Clamp Charging eChina
Inkcazo:I-Flexible Solar Charger,Umxhasi we-Solar Panel Charger,Ukubuyiswa kweClamp Back,Isikhwama Solar Soft Flexible,,
I-Flexible Solar Charger,Umxhasi we-Solar Panel Charger,Ukubuyiswa kweClamp Back,Isikhwama Solar Soft Flexible,,
Home > Imveliso > Bank Power Solar > I-Flexible Solar Charger
Iintlobo zeMveliso ze- I-Flexible Solar Charger , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, I-Flexible Solar Charger , Umxhasi we-Solar Panel Charger ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Ukunikezelwa kwamandla ombane osisiseko ombane ono-20000 mA
Ukukhanya kunombane, ukuhlawula yonke indawo, kwaye akusayi kubambelela kwimodi yokuhlawula i-AC; Amandla alanga ohlaza okomhlaba ngumbane olungele ukuba abantu basebenzise; Olu hlobo lwezinto ezisetyenzisiweyo zangaphandle kunye nezibane zenkampu...
Ishaja yelanga yonk
Amandla okubonelela: have stock, large quantity within 5 days of delivery
Lo msebenzi wase-Afrika othengisayo oshisayo oshishino othungelayo. Ukusetyenziswa kobutyebi buninzi obungenawo amanzi, ukwenzela ukuba xa unenkampu ngaphandle, awudingi ukuxhalabisa malunga neengxaki ezingenawo amanzi, amandla angaphezulu...
I- flexible energy solar .Izicwangciso ezinokutshatyalaliswa kweepaneli ezisezantsi zelanga, iiphotovoltaic okanye izithuthi ezingaphandle kweendlela zingasetyenziswa. Ukuqulunqwa kwamanzi kukuqala kokuhamba ngaphandle. Ibhetri yebhethri...
I-LED yombane welanga lamandla ISEBENZISA amandla elanga, SEBENZISA ibhetri ukugcina amandla kagesi emini, umlawuli weprogram ye-microcomputer ulawulwa ngokugqithiseleyo kwaye ubeka isibane ngokuzenzekelayo, inkqubo yesibane se-solar energy yiseti...
Iimodyuli zePV zePolyrystalline zePlazili yeSolar
Iipaneli zelanga zepolycrystalline ezinezinga eliphezulu lokuguqulwa kunye nokuphumelela okuphezulu. Polycrystalline energy solar . Impembelelo ebonakalayo ebuthakathaka, iteknoloji ekhethekileyo yenza izixhobo ezintle, eziqinileyo kunye neziqhwala...
I-Back Clamp Solar Wireless Charging
Le yombane welanga ibhetri engasetyenziselwa njengenxeba yefowuni. I-Battery Shell iye yaqonda ukulayishwa okungenaxhala kwi-Wireless Easy to Carry, akudingeki ukuba uthabathe ubuncwane obunzima bokutshaja okanye ikhebula yedatha enzima ukulungiswa....
Ikhefu lokuLawula i-Solar Panel Packing For Camping Lamp
Imveliso inomlinganiselo ophezulu wokuguqulwa, umkhuhlane omncinane, izinga lokuguqula eliqhelekileyo malunga ne-88%, ibhetri yinto yonke Imveliso yebhethri, ayikho uphawu olungenanto, umthamo wokumaketha ngumthamo wangempela, ukumelana...
Isikhwama seSolar esebenzayo
Lo ngumthombo wongxowankulu owenziwe ngesandla owenziwe ngesandla, onomthombo wombane onamandla amakhulu, ubuchwepheshe be-puster chip, i-USB yenkqubo yokuvelisa amandla, kunye nenkqubo yokukhusela isicatshulwa, umsebenzi wokulala oyingqiqo,...
Ifowuni iphakame i-Solar Power Battery Pack ihamba
Ukufaka ifowuni yefowuni ukuhlawula ubuncwane, i- Post Postow , ishaja yelanga ingasetyenziselwa ukuhlawula ifowuni yeselula okanye umdlali we-MP3, ingaba kwimoto, kwiofisi okanye kusetyenziswe ikhaya, yenza kube lula kakhulu ebomini bethu,...
Khupha i-Cigarette Lighter Power Solar
Le bhethri yelanga ityala ingcebo, ivelise i-cigarette ukukhanya kunye nokukhwela kwentaba, ukufunwa kwangaphandle okufunekayo, kunye nezibane zombane, i- LED ye- port efihliweyo i-port, ukungena kwamanzi kunye nobuncwane, ukuxhatshazwa kwamanzi ....
Amandla alanga alamandla kwaye avuselelwe amandla. Isityebi kwizibonelelo, sikhululekile ukusebenzisa, ngaphandle kokuthutha, ngaphandle kokungcola kwindalo. Idale ifom ephilayo entsha kuluntu, kwaye izisa uluntu kunye noluntu kwixesha lokugcina...
KwiChina I-Flexible Solar Charger Abaxhasi
Le mveliso yileja ekhoyo eyaziwayo eguquguqukayo ekwazi ukuguqula i-solar energy, eyona misebenzi ephambili yile: i-power power charging system storage, amandla eselula, isistim se-SOS kunye nemisebenzi ye-flashlight. ISEBENZISA ibhetri ye-lithium ephezulu yokusebenza njengethethri yokugcina ukufaka ifowuni ngelixa ufumana ilanga, kwaye ungasebenzisa i-flashlight eqinile ngexesha elifanayo. Imveliso ngokwayo inokuhlawulwa ngokuthe ngqo nge-adapter yamandla okutshaja, okanye inokuhlawulwa ngeplani yokutya yelanga, ekulungele ukuyisebenzisa. Yinto enhle kubahlobo bakho abathanda imidlalo yangaphandle ukuxazulula ingxaki ukuba idivayisi ayinawo umbane nanini na ixesha nendawo.
I-FIZZ GLOBAL iye yavelisa enye yezinto ezinamandla kakhulu zokuhlaziya zamandla kwi-market. Ikhutshwe kakhulu, kwaye iipaneli zayo zelanga zingaphathwa njengekhamera yekhamera endala.
I-FIZZ GLOBAL ithe ithemba ukuba umkhiqizo uza kunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni ngexesha lokuhlawula kwaye abantu bajolise kumandla acocekileyo.
Umxhasi we-Solar Panel Charger
Ukubuyiswa kweClamp Back
Isikhwama Solar Soft Flexible